Zoma 01 Novambra 2019. – FJKM
Zoma 01 Novambra 2019.
I Jeremia , ilay tena mpaminany marina dia:
1-Manoro làlana izay hahavelona ny vahoaka :
Ny fanekena ny fahefan’ny Babyloniana no atoron’i Jeremia fa hahatonga fahavelomana ho an’ny olona . Ny fanoherana izany kosa dia hahatonga fahababoana ho azy ireo sy ny fananany . Ekeo hatrany ny torohevitry ny Tenin’ Andriamanitra , na dia tsy mifanaraka amin’ny fihevitrao aza.
2-Mampitandrina ny amin’ny mpaminany sandoka
Ny mpaminany sandoka dia nilaza fa tsy ho rava i Jerosalema ary tsy ho lasan-ko babo ny vahoaka . Nila sitraka tamin’ny vahoaka manompo sampy sy ny mpitondra izy ireo. Hoy i Jehovah :tsy naniraka azy Aho . Tandremo fa misy hatrany ny mpaminany sandoka hatramin’izao. Miorena amin’ny finoana marina.
3-Manoro làlana ny tokony hataon’ireo mpaminany
Ny fifonana ho an’ny vahoaka , mba hamelan’ Andriamanitra ny heloky ny firenena no an’isan’ny adidy goavana sy makadiry tokony hataon’ny mpaminany . Namela fianarana tamin’izany i Jesoa satria Izy no mpaminan’ny mpaminany (Jao 17).